ကလိုစေးထူး: ဒုတိယမြောက် သဲထိတ်ရင်ဖို...
ကိုကလိုစေးထူးက သက်ရှိတင်မကဘူး သက်မဲ့နေရာမှာ ခံစားပြီးလည်း ရေးလို့တတ်တယ်နော့်။ လေးစားပါတယ်။
Jul 23, 2009, 12:36:00 AM
Jul 23, 2009, 12:48:00 AM
အကိုရေ ဒီဟာကို တဘဝလုံးနဲ့ ယှဉ်ရင် အသေးအဖွဲ ဒုက္ခလို ခံစားကြည့်လိုက်ပါ
Jul 23, 2009, 1:29:00 AM
Jul 23, 2009, 3:11:00 AM
Jul 23, 2009, 3:22:00 AM
Hi Brother, do not upset, nowadays almost everybody are facing this kind of situation, some people even worse. Do not feel so disappointed. Try to think in positive way and good things, eliminate bad things. Ur writing style as the place of hammer, are too nice and really perfect. Keep it up.
Jul 23, 2009, 4:43:00 AM
ကိုစေးထူးကို အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ သဘောကျတာ ....။း)
Jul 23, 2009, 6:22:00 AM
တရစပ်ကို ထုပစ်နိုင်တဲ့ တူ ကလေး မြန်မြန်ဖြစ်ပါစေ...
Jul 23, 2009, 7:29:00 AM
ကိုစေးထူးရဲ့ လက်ရာတွေကို ပြန်ဖတ်ရလို့ ၀မ်းသာတယ်။
Jul 23, 2009, 8:12:00 AM
ဒါမျိုးလေးတွေ ဖတ်ရတာ တကယ့် အရသာ။
Jul 23, 2009, 12:01:00 PM
သူများတကာ အလုပ်ပြုတ်လု ပြုတ်ခင် လှုပ်စိစိကို
အကိုရေ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Jul 23, 2009, 8:27:00 PM
Jul 23, 2009, 11:40:00 PM